JINGHPAW KASA: MYITKYINA KAW LUNGSENG MAWDAW (7) RIM
MYITKYINA KAW LUNGSENG MAWDAW (7) RIM
June (5) bat Lahkawng
Jinghpaw Mungdaw Myitkyina, N Jang Dung lawk na Aung Win Myat Company wang kata Miwa ga hte htaw shalai na matu Lungseng hpring hkra htaw tawn ai shaprai (10) re Mawdaw Kaba (7) hte shawng de gat ai Surf mawdaw langai hpe May (28) ya shani Myitkyina Balik ni kawn rim da ai lam na chye lu ai. N dai lungseng htaw mawdaw niamadu gaw Jinghpaw mung kaw na pru ai lungseng hte hpun mailung ni hpe prat shanat lagu galaw sha wa ai U Nyut Win hte U Thin Linn niare lam matut na chye lu ai. U Nyut Win gaw Balik dap kawn hkring sa nna Jade Land Company kaw maw daw gawt jang ai kawn hpang de Myen asuya masha kaba ni hte hkau chyap wa nna hpaga galaw wa ai kawn lu su wa ai re lam hte Jinghpaw Mung na Lungseng ni hte Hpun Mailung ni hpe n tara ai hku lagu galaw wa ai wa re lam chye lu ai. Myen asuya du salang ni hte prat shanat lagut bungli galaw sha wa ai U Nyut Win hpe myen asuya ni rim ai lam hpe na lu ai majaw Jinghpaw Mung masha ni myit pyaw myit dik ai hte U Nyut Win hpe asuya kawn gara hku ahkyak la mat wa na hpe myit shang sha la dingda nga ma ai lam matut na chye lu ai.
28.5.2012 နေ့လယ်ချိန် အင်ဂျန်ဒုံရပ်ကွပ်သင်တန်းကျောင်းအနီးရှိအောင်ဝင်းမြတ် Company ခြံဝင်းတွင် ပြည်ပတရုတ်နိုင်ငံသို့ ခိုးထုတ်ရောင်းချရန်ကျောက်စိမ်းအပြည့်သယ်ဆောင်ထားသည့် ဆယ်ဘီးကားကြီး (7)စီးနဲ့ လမ်းကြောင်းရှင်းရန်အတွက် အသုံးပြုထားသည့် Surf ကားတစ်စီးအား မြစ်ကြီးနား အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ထံ ဖမ်းဆီးခိုင်းကြောင်း သိရသည်။ ၄င်းကျောက်ကားကြီးများ၏ ပိုင်ရှင်သည် အစိုးခေတ်အဆက်ဆက် ကချင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ရှိသော ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ ကျွန်းသစ်နဲ့ သစ်မာ များ ပြည်ပတရုတ်နိုင်ငံသို့ ခိုးထုတ်ရောင်းစားလျက်ရှိသော မှောင်ခိုရာဇာကြီး ဦးညို့ဝင်းနဲ့အပေါင်းပါ ဦးထိန်လင်းတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဦးညို့ဝင်း သည်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ အငြိမ်းစားယူပြီး နောက်ပိုင်း Jade Land Company တွင်ကားမောင်းစားခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ နောက်ပိုင်း တွင်ညို့ဝင်းသည်ဌာန ဆိုင်ရာအကြီးအကဲအချို့နှင့်ညှိနိုင်း ပြီးတရားမ၀င် မှောင်ခိုအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့တရုတ်သစ်ခုတ်သမား
များအား တရားမ၀င်ခိုး သွင်းရာမှ ပိုက်ဆံ ချမ်းသာ လာပြီး ကျောက်မျက်ရတနာ၊ ကျွှန်းသစ်နှင့် သစ်မာများအားတရားမ၀င် သင်သွင်းရောင်းစားသောအကြီးဆုံး မှောင်ခိုရာဇာ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲအချို့နှင့်လုပ်စားနေသော ဦးညို့ဝင်း အားဖမ်း ဆီးထား ကြောင်း သိရ၍ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ၊ပြည်သားများ သည် လက်ရှိ ပြည်နယ်အစိုးရပေါ် အယုံ အကြည် ပ်ိုများလာ ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် မှောင်ခိုရာဇာကြီး ဦးညို့ဝင်း နှင့်အပေါင်းပါ ဦးထိန်လင်းနှင့် အခြားအပေါင်းတို့အားမည်ကဲ့၊ မည်ပုံ တရားစီရင်ရမည်ကို ကချင်ပြည်သူ၊ ပြည်သားများ စောင့်ကြည့်နေ ဆဲဖြစ်သည်။
shang lawt ni bai sa zing la yang kaja ai dai balik ni kaw na! balik ni mung maren lagut..lagut hpe lagut bai rim !lol
Lazum Aung Nan said...
Myen ngu ai gaw hpa mung hkum tawn manu law maren sha re lagut sumdu ni hpe shamyit kau mu law mandalay ka kaw balik jan ni ja nau noi na mi she makrim ai nga jawng num tsun wa ai an hte jinghpaw nialung seng dut na maw hpyi ni wa ja gayawp ma sai da yaw an ht ni gaw tsin yam dabangemiprwi hte nga ra ai prat yawng bai zingla mu law.